नेपाल आज | कोरोना निर्मूलनका लागि मसला बैंक !
शनिबार, ३१ जेठ २०७७ गते प्रकाशित - माधव गुरागाईं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालीहरुको भान्छामा विभिन्न प्रकारका मसलाहरू जस्तै लसुन, अदुवा, धनिया, खुर्सानी, बेसार आदिको प्रयोग हुनेहुँदा हुँदा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै हुने बताए I
प्रधानमन्त्रीले संक्रमितहरूको मृत्यु कोरोनाले नभई अन्य रोगको कारणले भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार मसलाकै कारण नेपालीहरूको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएको हो। तर बिज्ञहरुको अनुसार उहाँको दाबी आंशिक सत्य मात्र हो।
ढुंगे युगमा मानव सभ्यताको बिकाश हुँदै गर्दा मानिसहरूले खानेकुरालाई ताजा नै खान्थे। सबै समय खानेकुराको उपलब्धता नहुने हुनाले खानेकुरालाई भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने बाध्यताले मसालाको आविष्कार भएको बताइन्छ। लामो समयसम्म भण्डारण गर्नको निम्ति मसलालाई प्रिजरभेटिव (Preservative) को रुपमा प्रयोग भएको गर्न थलिएको हो ।
खानेकुरालाई ब्याक्टेरियाले नष्ट गर्ने गर्दछ। ब्याक्टेरियाको खानेकुरा माथिको आक्रमण तातो ठाउँमा धेरै हुने र चिसो ठाउँमा कम हुने गर्दछ। यसैकारण गर्मी हुने क्षेत्रमा अत्याधिक मसला प्रयोग हुने र जाडो हुने ठाउँमा गर्मीको तुलानामा कम मसला प्रयोग हुनेगर्दछ। उदाहरणको लागि भारतमा धेरै प्रकारका मसलाहरु अत्याधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छ तर नेपालको हिमाली भेगमा एकदमै थोरै मात्रामा मसलाहरु प्रयोग हुने गर्दछ।
मानव सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा फ्रिजको आविष्कार भयो। यसले गर्मी होस् या जाडो जस्तोसुकै मौसम हुने जुनसुकै क्षेत्रमा खानाको खानेकुराको भण्डारण नस्ट नहुने गरी लामो समयसम्म गर्न सहयोग गर्दछ।
फ्रिजको आविष्कार भएतापनि मसलाको स्वाद मानिसहरुमा बसिसकेको कारण मानिसहरूले मसलालाई आ-आफ्ना भान्छामा निरन्तर प्रयोग गर्न थाले। अहिलेको समयमा मसलाहरू प्रयोग हुने कारण खानेकुरालाई ब्याक्टेरियाको आक्रमणबाट बचाउनु भन्दापनि स्वादिलो बनाउन तथा बास्नादार बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। यद्यपि मसलामा औषधिजन्य गुण प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए बिपरित हुँदै नहुने भन्ने होइन।
हाम्रो शरीरमा खानाले कसरी काम गर्छ
हामीले ठोस खाना खाने गर्दछौं। यो ठोस खाना हाम्रो पाचन प्रणालीमा गैसके पछि सानो सानो तत्वहरु बन्ने गर्दछ। हाम्रो खानामा रहेको कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, खनिज, भिटामिन, प्रोटीन, आदि सानो सानो तत्व बनेर रगतमा मिसिन्छ र यो अक्सिजनसंग मिसिएर रक्त नलीको माध्यमबाट हाम्रो कोषहरुमा पुग्दछ। खानेकुराले यसरी विभिन्न कोषमा पुगेर शरीरको विकास र उर्जा दिने गर्दछ।
यसका साथसाथै प्रतिरक्षी (Antibody) हरु पैदा भएर रोगसँग लड्ने रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान गर्दछ। हाम्रो शरीरले बाहिरी तत्वहरु (Antigen) संग लड्न प्रतिरक्षी (Antibody) हरु शरीरले प्राकृतिक रूपमा बनाउँछ। जुनसुकै जिवाणुहरु जस्तै ब्याक्टेरिया, भाईरस आदि सरिरमा आएपनि त्यसको विपरीत प्रतिरक्षी प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुन्छ र यसमा मसलाको प्रभाव खासै धेरै हुँदैन।
मसलाहरूमा औषधिजन्य गुण हुने कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि केही सहयोगी हुन सक्दछ तर प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै मसलाकै कारणले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै हुने होइन।
नेपालमा नेपालीहरुमा रुप प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुनुको कारण तातो खाना (दाल भात तरकारी) खाने, शारीरिक गतिबिधिहरुमा सहभागी हुने जस्तै उकाली ओराली हुनुपर्ने कारण र परम्परागत खानेकुरामा कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, खनिज, भिटामिन, प्रोटीन, आदि पर्याप्तरुपमा हुनेहुँदा रोगसँग लड्ने क्षमता उच्च हुनेगर्दछ।
हाम्रो शरीरमा कसरी कोरोनाले आक्रमण गर्दछ?
कोरोनाकै कारणले गर्दा मानिसहरु मर्ने नै होइन। विभिन्न प्रकारको रोग लागेका मानिस, वृद्धवृद्धाहरु, बालबालिका, सुत्केरी आदि जो कमजोर छन् उनीहरुलाई कोरोनाको संक्रमण भए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ र उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। चिकित्सकहरुका अनुसार विभिन्न रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई तथा कमजोर मानिसहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कोरोनाको कारणले गर्दा कम हुने हुँदा उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसै कारणले संसार भरी नै धेरै मानिसको मृत्यु भैरहेको हो।
नेपाल सरकारको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी अन्य रोग लागेको कारणले गर्दा मानिसहरूको मृत्यु हुदा कोरोनाको संक्रमण पनि भए भएको खण्डमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको मानिदैन। कोरोनाको कारण नेपालीहरूको मृत्यु नभएको सरकारको दाबी छ। यसको वैज्ञानिक आधारहरु तथा नेपालमा यसको कुनै अध्ययन-अनुसन्धान भए नभएको भए प्रष्ट पार्नु पर्दछ र जनतालाई बुझाउनु पर्दछ।
प्रधानमन्त्रीको कोरोना सम्बन्धी बुझाइबारे विज्ञहरुले अल्पज्ञानको आरोप लगाएका छन्। एकजना विश्लेषकका एकजना विज्ञका अनुसार नेपालमा धेरैजना विद्वानहरु पढेर भएका छन्, तिनीहरुभन्दा पनि विद्वान लेखेर भएका छन्, लेख्नेहरुभन्दा पनि विद्वान बोलेर भएकाछन् र अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथा काम गर्ने मानिसहरुलाई विद्वान मानिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोल्ने विद्वान हुन।
ओलीको दाबी अनुसार मसलाकै कारण नेपालीहरूको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको भए सरकारले कोरोनाको नाममा किन १० अर्ब पैसा खर्च गरेको ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो। प्रधानमन्त्री मसला वितरण कार्यक्रम नामको कार्यक्रम सरकारले लागु गरेर मसला बैंकको स्थापना गर्नुपर्दछ।
उक्त मसला बैंकले सबै नागरिकहरूलाई थरिथरिका विभिन्न स्वाद, जस्तै: पिरो, अमिलो, गुलियो, टर्रो र तितो मसलाहरु वितरण गरी कोरोना लाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ। उक्त मसला बैंकमा नेपालमा पाइने मसलाहरू र विदेशबाट ल्याइने मसलाहरू को भण्डारण पर्याप्तरुपमा गर्नुपर्दछ। नेपालमा उत्पादन हुने मसलाहरु जस्तै लसुन, धनियाँ, बेसार, अदुवा, बेसार, आदि र विदेशबाट ल्याइने मसलाहरू राख्नुपर्दछ।
नेपालमा उत्पादन हुने मसलाको माग नेपाली उत्पादनले आपूर्ति गर्न नसके विदेशबाट भएर ल्याएर भएपनि बाँड्नु पर्दछ। आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तै मसलाको प्रयोग गरौं, कोरोना भगाऔ।